पेटको समस्या हटाउनका लागि यि घरेलु खानाको प्रयोग गर्नुहोस् र पाउनुहाेस् तत्कालै यस्तो परिवर्तन ! « गोर्खाली खबर डटकम
पेटको समस्या हटाउनका लागि यि घरेलु खानाको प्रयोग गर्नुहोस् र पाउनुहाेस् तत्कालै यस्तो परिवर्तन ! हामी प्राय पेट र स्वास्थ्य भन्दा पनि इच्छा र स्वादका लागि पनि कैयौ खाना खाईरहेका हुन्छौ ।
जसकाे कारणले गर्दा कहिले काही हामी स्वास्थ्यलाई असर पुग्ने खाना खान पुग्छौ । अस्वस्थकर खानाले मुख्यतः पेटमा असर गर्छ । समस्या यो छ कि सबै प्रकारका रोगको सुरुवात नै पेटमा हुन्छ ।बयदी हामीले खानापछि १ सय २५ ग्राम मेथी, दुई ग्राम ज्वानो र आधा ग्राम बिरेनुन मिलाएर खायौ भने पेटमा ग्यास बन्न रोकिन्छ ।
अनी एक पोटी लसुन र किसमिस नियमित चपाउँदा पनि पेट सफा हुन्छ । लसुन र किसमिसले पेटमा रहेका विकार हावालाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ ।
यदी दिनमा दुई वा तीनपटक अदुवा र नुन प्रयोग गर्यौ भने ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट छुटकारा मिल्नुका साथै समयमा भोक लाग्ने पनि हुन्छ । पेटलाई स्वस्थ राख्नका लागि दैनिक दुई ग्राम ज्वानो र आधा ग्राम नुन चपाएर खान पनि सकिन्छ ।
याे पनि, गायिका सुनिता बुढाले पहिलोपटक आफ्नै कहानीमा गाइन सबैलाई रुवाउने तीज गीत ‘माइतीको माया’ (भिडियो हेत्नुस्) । लोकदोहोरी क्षेत्रमा यो समय सबैको मन मुटुमा बसेकी लोकप्रिय गायिका सुनिता बुढा छेत्रीको तीज गीत ‘माइतीको माया’बजारमा सार्वजनिक गरेकि छन् ।